Kedu ihe bụ BIOS na ihe ọ bụ maka PC gị | Nzukọ mkpanaaka
Kedu ihe bụ BIOS na ihe ọ bụ maka na PC gị
Edere Ferreno | 17/11/2021 15:55 | Sistemụ arụmọrụ
Ihe mejupụtara PC anyị nwere ọtụtụ ihe dị iche iche. Nke a pụtara na e nwere ọtụtụ okwu ndị anyị ga-amata nke ọma, ụfọdụ n'ime ha dị ọhụrụ nye ọtụtụ mmadụ. Ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ bụ ịmata ihe bụ BIOS na kọmputa. Okwu ị nwere ike nụrịrị na nke ịchọrọ ịmatakwu banyere ya.
Ọzọ anyị na-agwa gị ihe BIOS bụ na ihe ọ bụ maka na PC gị. Nke a ga-enyere gị aka ịmatakwu gbasara echiche a na mkpa ọ dị na kọmpụta taa. Ebe ọ bụ echiche na ọtụtụ n'ime unu ahụla na PC gị n'oge ụfọdụ na nke ịchọrọ ịmatakwu banyere ya. Ntuziaka a ga-enyere gị aka.
1 Kedu ihe bụ PC BIOS
2 Kedu ihe bụ BIOS na PC maka?
3 Otu esi enweta BIOS
3.1 Tebụl ịnweta BIOS
4 Nweta BIOS na Windows
Kedu ihe bụ PC BIOS
BIOS bụ mkpọokwu nke na-ezo aka na mkpụrụokwu Basic Input-Output System, nke anyị nwere ike ịsụgharị dị ka Basic Input-Output System na Spanish. BIOS bụ ihe mbụ na-agba ọsọ mgbe anyị gbanyere kọmputa, mbadamba nkume, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ngwá electronic ndị ọzọ, ya mere ọ bụ ihe a na-ejikarị eme ihe, dị ka ị pụrụ ịhụ. N'ihe banyere kọmputa, a naghị eji aha BIOS eme ihe mgbe niile, ọ bụ ezie na echiche ahụ bụ otu ihe n'ọnọdụ niile.
N'eziokwu, anyị na-eche ihu usoro nke koodu igbu (software) nke echekwara na mgbawa na motherboard (ngwa PC). Nke a bụ ihe na-enye ya ohere ịmata ihe ejikọrọ na ya, ma ọ bụrụ RAM, processor, nkeji nchekwa na ndị ọzọ. BIOS na-enye ohere ihe anyị nwere n'ezie bụ PC, ebe ọ bụ na ọ bụghị ya, anyị ga-enwe naanị motherboard.
Ugbu a BIOS na-enye nnukwu ozi, ozi na n'ọtụtụ ọnọdụ agaghị ahụ n'ime sistemụ arụmọrụ n'onwe ya. N'ime BIOS bụ ebe ị nwere ike hazie ọtụtụ njirimara nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaike ọ bụla ejikọrọ na motherboard, yabụ na ọ nwere nnukwu mkpa na kọmpụta, ebe ọ bụ ọnụ ụzọ nke nhọrọ ndị a. Ya interface agbanweela ka oge na-aga ma ugbu a enwere nsụgharị nke anyị nwere ike ọbụna iji òké, otu n'ime mgbanwe ndị a ma ama na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Kedu ihe bụ BIOS na PC maka?
Dị ka anyị kwuru na mbụ, usoro mmalite kọmputa na-aga site na-agba ọsọ BIOS. Nke a bụ ebe a ga-amata ngwaọrụ dị iche iche arụnyere na PC motherboard. BIOS bara uru ka ha niile jikọọ na motherboard site na ngwanrọ, nke mere na a na-emepụta njikọ na ụkpụrụ nduzi, nke bụ nke a ga-eji ruo mgbe PC ga-amalite ọzọ.
BIOS dị na kọmpụta na-enye ọtụtụ ozi, n'ime ya, anyị na-achọta nkọwa gbasara ọdịda nwere ike ime mgbe anyị malitere PC, karịsịa n'ihe banyere ọdịda ngwaike. Edere usoro ụda na BIOS a nke a ga-agbasa na ọkà okwu ma ọ bụrụ na enwere ọdịda na akụrụngwa. Enwere ike ịgụta usoro a na ntuziaka motherboard nke kọmpụta ahụ. Ya bụ, ọ bụrụ na akụrụngwa ọ bụla daa (RAM ma ọ bụ kaadị eserese), ụda ọ ga-eme ga-adị iche, ka e wee mata ya ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na anyị nwere motherboard dị na elu-n'etiti ahịa, mgbe ahụ, anyị nwere abụọ BIOS na ya. Ọ bụ akụkụ nke na-enyere aka nke ukwuu, ebe ọ bụrụ na e mebiela BIOS, ihe si na ya pụta bụ na motherboard adịghị arụ ọrụ, ihe nwere ike ịbụ nnukwu ego na ego efu maka ndị ọrụ. Site n'inwe okpukpu abụọ, ị nwere ike ịmepụta ma ọ bụ mepụta otu mgbawa na nhazi na nke abụọ. Ọ bụ ezie na a na-ahapụ mmelite BIOS, iji zere ụdị nsogbu ndị a, ọ bụ ụzọ dị mma iji hụ na ọ dịghị ihe ga-eme.
Ntọala ndị echekwara na BIOS a ga-echekwa ya ọbụlagodi mgbe ekwentị kwụsịrị na netwọk eletrik ruo ogologo oge. A na-echekwa ya na batrị nke dị na motherboard, n'ụzọ na nchekwa ya bụ ihe e ji n'aka ruo ọtụtụ afọ. Ọ nwere ike ime na batrị ahụ ga-agwụcha, mana ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị ahụ ọ bụghị nsogbu. Ọbụlagodi na batrị gị anwụọla, naanị ị ga-edochi ya nke ọma wee bugharịa mgbanwe ọ bụla, otu a ga-esi gosipụta nhazi ahụ ọzọ, na-enweghị ihe ọ bụla funahụrụ gị. Yabụ na ọ bụ obere nchegbu maka onye ọrụ ọ bụla.
Otu esi enweta BIOS
Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ịmara ihe BIOS bụ. Ọzọkwa ka anyị nwere ike nweta ya na PC ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ka esi enweta ya. Oge anyị ga-abanye na ya bụ mmalite nke kọmputa anyị. Nke a bụ ihe na-adịghị agbanwe na PC ọ bụla. Nke ahụ bụ, ọ baghị uru ihe akara PC gị bụ, na oge anyị ga-abanye na BIOS bụ otu ihe ahụ.
Ọ bụ ezie na oge ahụ bụ otu ihe ahụ, enwere ike inwe obere esemokwu n'ụzọ e si enweta ya. Ihe dị iche bụ naanị igodo nke anyị ga-akụ. Iji nweta BIOS, a na-emerịrị ya pịa igodo Hichapụ n'ime sekọnd ise mbụ mgbe ịmalite kọmputa. Anyị ga-adị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere kọmputa na-agba ọsọ ngwa ngwa.
Igodo nke anyị ga-akụ na ya na-agbanwe agbanwe. N'ọtụtụ kọmputa, ọ bụ ihe anyị nwere ike ime site na ịpị igodo Hichapụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na nke gị dị iche. Ọ bụrụ na igodo DELETE enyeghị gị ohere ịbanye na BIOS na kọmputa gị, ọ nwere ike ịbụ otu igodo ndị ọzọ: ESC, F10, F2, F12, ma ọ bụ F1. Ihe mere na ụdị kọmputa gị bụ nke ga-ekpebi igodo ị ga-pịa, mana ọbụlagodi n'etiti kọmpụta nwere otu akara ị ga-pịa igodo dị iche. N'ọnọdụ niile, a ga-emerịrị ya n'ime sekọnd ise mbụ mgbe PC malitechara.
Tebụl ịnweta BIOS
Kechioma anyị nwere ndepụta na ndị na-emepụta kọmputa na igodo nke ị ga-pịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta BIOS a na kọmputa. Ndị a bụ igodo a na-ahụkarị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ya na kọmputa gị n'oge ụfọdụ, dabere na ika:
Emeputa Igodo ohere BIOS na-emekarị Igodo ndị ọzọ
ASROCK F2 Gbanyụọ
ASUS F2 DEL, Fanye, F12, F10
GiGABYTE F2 Gbanyụọ
Msi Gbanyụọ F2
ZOTAC THE F2, DEL
Nweta BIOS na Windows
Na mgbakwunye na ịnweta na mmalite, enwere usoro ọzọ maka Windows. N'ihi ya, anyị ga-enwe ohere na BIOS nke kọmputa anyị mgbe ọ dị mkpa. Nke a bụ usoro anyị nwere ike iji ma ọ bụrụ na anyị nwere Windows 8, Windows 8.1 ma ọ bụ Windows 10 arụnyere na kọmputa anyị. Ọ bụrụ na ị nwere nke ọ bụla n'ime nsụgharị ndị a, ị ga-enwe ike iji usoro a. Ọ bụkwa ụzọ dị mfe isi mee ya.
Na mmalite menu anyị na-ede BIOS na anyị ga-enweta usoro nhọrọ na ihuenyo. Nke masịrị anyị na nke a bụ Change Advanced Start option. Ọ bụrụ na nhọrọ ahụ egosighi, anyị nwere ike dee ya ozugbo na igwe nchọta. Mgbe anyị meghere nhọrọ a na ihuenyo, anyị ga-enwe ike ịhụ na anyị nwetara ngalaba a na-akpọ Advanced Startup. Ọ bụrụ na anyị pịa bọtịnụ Malitegharịa ekwentị ugbu a n'ime ọrụ a, kọmputa ahụ ga-amalitegharị na ọnọdụ pụrụ iche nke anyị ga-enweta ohere dị iche iche.
Na menu nke ga-apụta na-esote, na ihuenyo na-acha anụnụ anụnụ, pịa nhọrọ nsogbu. Na ihuenyo ọzọ anyị ga-pịa nhọrọ dị elu nhọrọ. Nhọrọ ọzọ anyị ga-pịa bụ nhọrọ a na-akpọ Nhazi firmware UEFI. Site na ime nke a, kọmpụta ahụ ga-amalitegharị wee banye na BIOS ozugbo. Nke a bụ ihe ga-ewe nkeji ole na ole, mgbe ahụ, anyị ga-anọ na interface BIOS na kọmputa anyị, nke gbanwere nke ukwuu ka oge na-aga. Dị ka ị na-ahụ, ọ bụ ihe na-adịghị mgbagwoju anya na ọ dịghị ewe ogologo oge ịbanye na ya, ya mere anyị nwekwara ike ịnweta BIOS na Windows, ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Kedu ihe bụ BIOS na ihe ọ bụ maka na PC gị
Ihe nkiri 3D ga-ekiri na PS4 VR
Fortnite VR, olee mgbe ụdị Virtual Reality ga-abata?